ढोका थुनेर बस्दा काठमाडौं’मा ‘झ्याल’बाट छिर्‍यो’ कोरोना’
May 14, 2020 1477
मंगलबार साँझ भक्तपुरमा दुई र काठमा’डौंमा एक जना संक्रमित फेला परे । ती तीनैजना लकडाउनको समयमा काठमाडौं बाहिरबाट उपत्यका छिरेको देखियो! उनीह”रु कसरी संक्रमित भए भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन । तर यो घटना’ले काठमाडौं उपत्यका’बाहिर समू’दायमै संक्रम’ण फैलिएको हुनसक्ने आधारलाई बलियो बनाइदिएको छ ।
पछिल्ला संक्रमितको यात्रा विवरणले संक्रमित क्षेत्र’बाट राजधानी प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु’को परीक्षण र उनीहरुको सम्पर्कमा आए’कालाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ व्यापक गर्नुपर्ने देखिएको छ । लकडा’उनको ५२ दिन आइपुग्दा हामी चैत १० गतेभन्दा पनि गम्भीर र ज’टिल मोडमा आइपुगेको समाचा”रमा उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्यविद् दिनेश न्यौपाने भन्छन्–‘हामीले बाहिरबाट संक्रमण भित्रन्छ भनेर ढोका’ थुन्न खोज्दाखोज्दै झ्यालबाट प्रवेश गरिसकेको पत्तो ‘पाएनौं । उनले सीमा बन्द गर्दा चोर’बाटो हुँदै प्रवेश गर्नेको संख्या बढेको सुनिएको भन्दै यस’ले थप जो’खिम बढाउने चेता’वनी दिए । यो ख’बर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।( फाइल तस्वीर)
Prevआज जेठ १ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस् !
Nextफेरि थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित संख्या २५० पुग्यो
गोंगबु ह’त्या आरोपितको बयान: पटक-पटकको ‘
कोरोनाले नि’धन भएको भनिएका ब्यक्तिको छैन आँखा, घाँटीमा पनि गहिरो चो’ट भन्दै अस्पतालमा हंगामा (भिडियो सहित)
भर्खरै बाबू गुमाएका आदर्श मिश्रालाई कारबाही गर्न चिकित्सक संघको माग (बिज्ञप्ती सहित)